Gudoomiyaashii Wadadjir iyo Wardhiigley oo xilalka wareejiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoomiyaashii Wadadjir iyo Wardhiigley oo xilalka wareejiyey
A warsame 25 April 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Guddoomiyaashii degmooyinka Wadajir iyo Wardhiigley ayaa xilka ku wareejiyey gudoomiyaal cusub oo boosaskooda loo magacaabay.
Gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Xasan Caddow (Daaci) ayaa xilka ku wareejiyey gudoomyaha cusub ee degmadaas loo magacaabay Axmed Cabdulle Afrax oo ah nin dhallinyaro ah.
Gudoomiyihii hore ee dagmada Wadajir Axmed Xasan Caddoow Axmed Daaci oo munaasabada ka hadlay ayaa si rasmi ah xilka degmada ugu wareejiyay gudoomiyaha cusub isagoo shacabka degmadaasina ka dalbaday iney si wanaagsan ula shaqeeyaan gudoomiyaha cusub.
Axmed C/lle Afrax Gudoomyaha cusub ee la wareegay xilka degmada Wadajir ayaa gudoomiyihii hore ku amaanay waxqabadkii uu muujiyay mudadii uu xilkaasi hayay isagoo balan qaaday inuu ka shaqeeyndoono horumarinta adeegyada bulshada.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo munaasabadda ka hadlay ayaa ugu hambalyeeyay guddoomiyihii hore waxqabadkiisii iyo sida wanaagsan ee uu xilka u wareejiyay, isagoo ku boorriyay guddoomiyaha cusub inuu la yimaado waxqabad la taaban karo uuna kasbado kalsoonida shacabka.
Dhanka kale, gudoomiyihii hore ee degmada Wardhiigley Deeqo Cabdiqaadir Maxamed ayaa xilka ku wareejisay gudoomiyaha cusub ee degmadaas Yaasiin Nuur Ciise.
Gudoomiyihii hore ee degmadaas Deeqo C/qaadir oo munaasabadda xil wareejinta ka hadashay ayaa sheegtay in ay aad ugu faraxsanyahay in xilka gudominimada ay ku wareejiso guddoomiyaha cusub eedDegmada loo doo magacaabey, iyadoo shacabka ka codsatay inay la shaqeeyaan guddoonka cusub ee degmada.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Wardhiigley Yaasiin Nuur Ciise yaa sheegay in uu ka shaqeyn doono horumarinta adeegyada guud ee bulshada iyo xoojinta amniga, waxaana uu shacabka degmada ku nool ka codsaday inay arrimahaasi gacan ku siiyaan, isagoo mahadcelin u jeediyay maamulka Gobolka Benaadir iyo Mas’uuliyiintii hore ee degmada.
Xoghayaha guud ee Maamulka Gobalka Banaadir Maxamed Sheekh Cilmi oo ugu dambeyntii munasabada ka hadlay ayaa ugu baaqey bulshada ku nool degmada Warta Nabadda iney la shaqeeyaan Maamullka cusub ee degmada loo soo magacaabay, isagoo guddoonka cusub kula dar daarmay in uu la yimaado isbadal muuqdo.
Labo gudoomiye oo kaliya ayaan weli xilka loaga qaadin tan iyo markii uu gudoomiyaha gobolka noqday Xasan Muungaab, kuwaasoo kala ah: gudoomiyaasha Howlwadaag iyo Yaakhshiid oo iyagana la hadal hayo in xilalka laga qaadayo.
Wasiirrada Soomaaliya oo ansixiyey gudoomiyaha baanka dhexe & ku xigeenkiisa
Warmurtiyeed: Shirweynihii amniga ee Muqdisho lagu qabtay 20-23 April 2014